भारतमा कोरोनाविरुद्धका दुई खोपलाई प्रयोगको अनुमति – Makalukhabar.com
भारतमा कोरोनाविरुद्धका दुई खोपलाई प्रयोगको अनुमति
‘काेभिड १९ महामारीका बिच राहतकाे स्वास लिँदै भारत’
मकालु खबर	 २०७७ पुष १९ १४:२७ मा प्रकाशित 73
काठमाडाैं । भारतमा कोरोनाविरुद्धका दुई खोप, काेभिसिल्ड र काेभ्याक्सिन ले आपतकालिन प्रयोगकाे अनुमति पाएका छन् । भारतकाे औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले अक्सफाेर्ड काेभिड १९ भ्याक्सिन काेभिशिल्ड र भारत बायाेटेक काेभ्याक्सिनकाे आपतकालिन प्रयाेगकाे लागि अनुमति दिएकाे बीबीसी हिन्दीले जनाएकाे छ ।
ड्रग्स कन्ट्राेलर जनरल अफ इण्डियाले काेभिशिल्ड भ्याक्सिन ७०.४२ प्रतिशत प्रभावकारी रहेकाे बताएकाे छ । यो भारत मेडिकल रिसर्च काउन्सिलको सहयोगमा भारत बायोटेकले बनाएको खोप हो ।
डीसीजीआईका निर्देशक डा. वीजी सोमानीका अनुसार भारत बायाेटेक काेभ्याक्सिन सुरक्षित र प्रतिरक्षा प्रणााली बलियाे बनाउन सक्षम छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्- ‘डीसीजीआईले भारतको सीरम संस्थान र भारत बायोटेक भ्याक्सिनलाई अनुमोदन गरेको छ । यसले देशलाई कोरोना स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्दछ । बधाई छ भारत ।’ उनका अनुसार विषय विशेषज्ञ समितिले शनिबार कोभ्याक्सिनको आपतकालीन प्रयोगका लागि भारत बायोटेकको ससर्त स्वीकृति सिफारिस गरेको थियाे ।
डीसीजीए निर्देशकका अनुसार भारत बायोटेकले काेभ्याक्सिनकाे मानव र विभिन्न पशु प्रजातिमा गरिएका सबै परीक्षणको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे थियाे । अहिलेसम्म उपलब्ध डाटा अनुसार खोप सुरक्षित छ ।
विषय विशेषज्ञ समितिले खोपको सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी डेटाको समीक्षा गर्‍यो र सार्वजनिक हितमा आपतकालमा प्रतिबन्धित प्रयोगको लागि अनुमति दिन सिफारिस गर्याे । विशेषगरी कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेनलाई विचार गरी याे अनुमति दिइएकाे हाे । कम्पनीको क्लिनिकल परीक्षण जारी रहनेछ ।
कोभिशील्ड र काेभ्याक्सिन दुवैकाे दुई डाेज दिइनेछ । यसलाई २-८ डिग्री सेल्सियस तापमानमा राख्नुपर्नेछ । यस्तै क्याडिला हेल्थ केयरको भ्याक्सिनकाे तेस्राे चरणकाे क्लिनिकल ट्रायल अनुमति समेत दिइएकाे छ ।
यस घोषणापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैज्ञानिकहरु र यस खोजमा संलग्न सबैलाई बधाई दिएका छन् । उनले भने, ‘उत्साहित लडाईँलाई सुदृढ पार्न एक निर्णायक मोड ! डीसीजीआईको भारतको सीरम संस्थान र भारत बायोटेक खोपको स्वीकृति एक स्वस्थ र कोभिड-मुक्त देशतर्फकाे एक कदम हो । भारतलाई बधाई छ । हाम्रा मेहनती वैज्ञानिक र आविष्कारकहरू सबैलाई बधाई छ ।’
यस्तै उनले थपे, ‘यो गर्वको कुरा हो कि आपतकालीन उपयोगका लागि अनुमोदित भएका दुई खोपहरू दुबै भारतमा बनाइएको हो । यसले हाम्रो वैज्ञानिक समुदायले आत्मनिर्भर भारतको सपना पूरा गर्ने इच्छालाई दर्शाउँछ । आत्मनिर्भर भारत, जसको आधार हो – सर्वेक्षण भावन्तु सुखिन: सर्वेक्षण सन्तु निरमा ।’
भारत सरकारले आगामी जुलाईसम्म तीस करोड नागरिकलाई खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा तीन करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरुलाई नि:शुल्क कोरोना खोप लगाइने छ । बाँकी २७ करोडका सम्बन्धमा भने अन्तिम निर्णय लिन बाँकी रहेको भारत सरकारले जनाएकाे छ ।
अनुमति पाएको कोभिसिल्ड खोपको उत्पादक सेरम विश्वकै ठूलो खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमध्येमा गनिन्छ । सेरमले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले विकसित गरेको खोपको पाँच करोडभन्दा बढी डोज उत्पादन गरेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । नेपालमा पनि भारतीय खाेप किन्ने तयारी तथा प्रक्रिया चलिरहेकाे छ ।
दाजु निरञ्जनको निधनसँग शेखर कोइराला मर्माहत